DAAWO:Markhaati Duuliyihii Damiirka lahaa: Col. Axmed Maxamed oo Booqasho ku yimi Magaaladii uu diiddey inuu diyaaraddiisa ku duqeeyo |
DAAWO:Markhaati Duuliyihii Damiirka lahaa: Col. Axmed Maxamed oo Booqasho ku yimi Magaaladii uu diiddey inuu diyaaraddiisa ku duqeeyo
“Maalintaa waxa lagu xidhay diyaaradii aan waday Bambooyinkii kuwaasoo magacooda la yidhaahdo FAB 500 ……
Hargeysa (GNN) –Duuliyihii Damiirkiisu u diidey inuu diyaaraddiisa ku bam-gareeyo magaalada Hargeysa, isagoo ka duulaya isla madaarka Hargeysa badhtamihii 1988 markii dagaalku ka socdey, ayaa booqasho ku yimi magaaladii uu duqaynta uga tudhay 25 sannadood kadib.
Col. Axmed Maxamed Xasan, oo ka tirsanaa Ciidamadii Cirka ee Dowladdii Milateri ee Siyaad Barre, waxa uu duuliyaha Diyaarad nooceedu ahaa Mig 17 oo loogu soo diray Hargeysa inay hawlgal duqayn ah ka fuliso, balse, si lama filaan ah uga degtey Jabuuti, kadib markii ay madaarka Hargeysa ka xambaaratay bambooyin loogu talagalay inay ku rushayso qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa, July, 1988, bil kadib markii xooggaggii SNM ay dagaalka ku soo galeen magaalooyinka Hargeysa iyo Burco, 31 May iyo 27 May 1988, markaas oo taliskii macangagga ahaa ee Muqdisho uu bilaabay inuu si aan kala sooc lahayn diyaarado iyo madaafiic ugu duqeeyo magaalada iyo weliba dadkii ku noolaa iyo kuwii ka sii qaxayeyba.
Col. Axmed Maxamed Xasan oo u dhashay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, waxa uu booqasho ku yimi magaaladii naxariistiisa heshay ee uu u damqaday oo hadda ah Caasimadda Somaliland, Hargeysa, Salaasadii dorraad, isaga oo ka soo kicitimay yimi dalka Luxemburg oo uu magangelyo siyaasadeed ka helay wakhtigaa, kadib markii dowladda Jabuuti oo uu magangelyo weydiistey ku wareejisey Qaramada Midoobey.
Waxana uu shacbiga iyo waxgaradka bulshada Somaliland, gaar ahaan Hargeysa kala kulmay soo dhoweyn, qiimayn iyo qaddarin ballaadhan oo ay ugu muujinayaan abaalka ay ugu hayaan tallaabadii aadaminimo ee uu dadkiisa ugaga tudhay qumbuladihii loogu soo dhiibey inuu ku garaaco magaalada Hargeysa.
Dhacdadaas oo dad badan sheeko uun ku ahayd ayaa wargeysyada ka soo baxa Hargeysa ay ka waraysteen Col. Axmed Maxamed Xasan.
Isaga oo ugu horrayn ka jawaabaya wakhtigii uu yimi Hargeysa iyo xaaladdu sidii ay ahayd, waxa uu yidhi,
“Waxay ahayd markay ugu darayd oo dagaal sokeeye ayaa socday oo shacbiga lagula dagaalamayay, waxaanay ahayd meel shacbi lagula dagaalamayo halkii ugu horeysay ee aan imaado. Markaa xaaladda Hargeysa iyo nawaaxigeedu ku sugnaayeen cida joogtay oo indhahooda ku aragtay mooyaane wax la sifayn karayo maaha.
“Anigu bedal kuma iman halkan, dagaalkaa markaa socday, waxaana la noo soo diray inaanu ka qayb-galo dagaalkii socday, waxaana iga soo horeeyay diyaarado kale iyo rag duuliyayaal iyo farsamo-yaqaano ah, kuwaas oo halkan joogay muddo. Intii dagaaladu socdeena marba waxa la soo dirayay diyaarado cusub iyo raggii ka shaqaynaayay. Aniga iyo duuliye kale oo kala wadanay laba diyaaradood oo Miig 17 ah, waxaanu ahayn xoojin lagu xoojinaayay ciidamadaas halkan dagaalka ka waday, diyaaradaha miig 17-ka ah ee aanu wadanayna waxay ahaayeen diyaaradaha kaliya ee qaadi karayay Bambooyinka culus, sidaas darteed ayaana naloogu soo diray inaanu u isticmaalo Bambooyinka 500 ee Kiiloo ah Hargeysa. Markaa waa nasiib-darro, arrin aad u fool-xun ayaanay runtii ahayd, markaan xasuustana runtii aad iyo aad ayay ii dhibaysaa, laakiin xaqiiqada in laga hadlo waa wax loo baahan yahay”.
Axmed Maxamed, waraysi khaas ah oo uu la yeeshay wargeyska Ogaal, isaga oo ka waramaya sidii go’aanku ugu dhashay iyo goorta uu gaadhey go’aanka inuu diyaaraddiisa ka dejiyo Jabuuti, waxa uu yidhi,
“Waxay ahayd maalintii aanu nimid bishii July, laakiin taariikhday ku aadanayn hadda si fiican iiguma saxna. Waxaanse qiyaasayaa inay ahayd 10-kii July, maalintaas waxaanu ka soo baxnay Muqdisho anaga oo laba diyaaradood ah, waxaanu ku degnay Gaalkacyo, oo aanu muddo ku nasanay, shidaalna ka qaadanay, Hargeysa waxaanu nimi qiyaastii illaa 5:00 Galabnimo, habeenkii waanu hoyanay, maalintii ka dambaysay waxay ahayn hawshii naloosoo diray inaanu bilawno. Markaa anigu cilado ayaan safarkaa dhexdiisa diyaarada ku soo arkay, waxaan idhi waa in cilada laga saaraa, maalintaasna diyaaridii anigu aan waday way fadhiday, tii kalena waxay bilawday hawshii markaas loo soo diray (Duqayntii). Maalintaa markii hawsha la dhameeyay, maalintii labaad waa maalinta aan tegay Jabuuti, illaa 12:00-kii ama 13;00-kii maalinnimo inay ahayd ayaan filayaa marka Jabuuti aan ka dagay ee 1988-kii.
“Maalintaa waxa lagu xidhay diyaaradii aan waday Bambooyinkii kuwaasoo magacooda la yidhaahdo FAB 500. Markaana waxaa la noo diray inaan fulino hawshii, garoonka Hargeysa ayaanu ka kacaynay, isla Hargeysa ayaa la doonayay inaanu hawsha ka filino oo aanu duqayno. Waxa kale oo aanan kuu sheegin, waxa nala tusay Galabtii aanu Hargeysa nimi meelaha la doonayo in la garaaco, iyada oo naloo tilmaamay magaalada qaybo ka mid ah. Markaa ka dib-na waatan subaxnimadii labaad ee danbe, markii diyaaradaydii ciladii laga saaray waxa naloo diray in aanu meelihii nala tusay garaacno. Markaa waanu kacnay labadayadii diyaaradood oo wada socona, waxaananu u kacnay Jahada qoraxdu u dhacdo, iyadoo laga duulayo hawada caadiyan waxay diyaaraduhu ka kacaan hadba dhinac, markaanu kacnay waxaanu u leexanay dhinaca midigta, si aanu hawshii magaalada u galo. Anigu, waxaan qaatay markaa kooraska lagu taggo Jabuuti, iyada oo aan go’aankaygaasi ahayn mid wakhtigaas hawada aan marayay igu dhashay, balse uu ahaa mid aan hore u qaatay, oo aan samaystay Safarkii iyo tubtii aan ku tagi lahaa Jabuuti, Bambooyinkii 500 ee Kiiloo ahaa ee aan sidayna waxaan ku riday Naasa-hablood waxyar marka la dhaafo meel ah, iyaga oo ah markaa hab aanay qarxaynin ah oo wata amaankooda iyo fuyuuskoodii, si aan u helo Shidaal igu filan, oo isticmaalkii shidaalku iiga yaraado, waayo markaan culayska iska rogo waxa badanayaaya madhaxa shidaalka. Markaan iska dejiyay Banbooyinkii, safarkiigii ayaan halkii ka sii watay, sidaas ayaanan ku tagay Jabuuti. Safarkaygu waxa uu ahaa ugu yaraan 15 daqiiqo, illaa 18 daqiiqo ayaan ku tagay, ka dib waxaan bilaabay in aan isu diyaariyo degitaankii, Shiidaalkiina wuu iga sii idlaanayay, dabadeedna waxaan u degay si deg-deg ah. (Emergency land), meel Xeebta ah, oo aan Madaarka ahayn”.
Axmed Maxamed Xasan, waxa uu intaas ku daray in goobtaas ay ka heleen niman kalluumaysato ah, kuwaas oo uu sheegay inay u dhiibeen dowladda Jabuuti. Waxana uu aad ugu mahadnaqay dowladda Jabuuti oo si fiican u qaabishey, uguna ballanqaadday in uu dalkooda six or ah ugu noolaan karo, isaga oo sheegay inay ku ammaaneen go’aanka geesinimada ah ee uu qaatay, isaga oo dadkiisa u tudhaya. Balse, waxa uu sheegay in ammaankiisa darteed, uu u doorbiday inuu isu dhiibo Qaramada Midoobey oo u raadisey Magangelyo siyaasadeed.
Waxa aan shaki ku jirin in Duuliye Axmed Maxamed Xasan uu qaaday tallaabo taariikhi ah, go’aankiisa geesinimada leh ee uu qaatay wakhtiga adagna uu taariikhda Soomaalida guud ahaanna kaga qoray uu baal dahab ah, taas oo uu kaga duwan yahay saraakiishii la midka ahayd ama ka darajada sarraysey oo go’aamadii ay qaateen maalintaas ay ku galeen taariikh madow oo maanta ay ku nool yihiin diiqad ah oo dhadhan lahayn, sida Gen. Maxamed Cali Samatar oo isaga rikoodh loogu hayo inuu qirashada inuu isagu bixiyey amarka Duqaynta magaalada Hargeysa ee uu diidey Col. Axmed Maxamed Xasan, gaar ahaanna dadka reer Somaliland waxay labadaas sarkaal ku leeyihiin xusuus taariikhi ah oo kala duwan.
“Shaqsiyaad ama dad ka mid ah oo aanu isku aragnay Yurub, oo hambalyo ii soo jeediyay way jireen. Aniga oo markaa isku arka, inaanay jirin wax la iigu hambalyeeyaa, laakiinse gutay waajibkii la iiga baahnaa ee dadnimo, oo ahayd in aan shacabkayga bad-baadiyo, oo dadka walaalahay ah aan ka daayo dhibtii ay gaysan lahayd diyaaradii aan waday. Waayo maan ahayn Aalad sidii la doono loo adeegsanayo. Markaa, wax dheeraad ah, oo aan u sameeyay ma jirin, laakiinse dadku waxay igu geesinimo galiyaan waajibkaygaa aan gutay,” ayuu yidhi Col. Axmed Maxamed oo ka jawaabayey dareenka dadka, gaar ahaan Jabhadihii ka soo horjeedey taliskii Siyaad Barre ay u arkeen tallaabada uu qaaday.
Jawaabtanina waxay ka soo horjeeddaa doodda Cali Samatar iyo Dhagarqabayaasha la midka ah ee go’aamada khaldan ku galay taariikhdu ay ku doodaan ee ah inay gudanayeen waajibkoodkoodii qaran iyaga oo duqeynayey magaalada Hargeysa, kuna leynayey dad masaakiin ah oo rayid ah hubkii lagu soo iibiyey cashuurtooda.